tag: အမှတ်တံဆိပ် | Martech Zone
မျှဝေခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ဘာကြောင့် Content Amplification Strategy လိုအပ်သည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2018 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2018 စာရာဝီလျံ
အကယ်၍ မင်းကဒီကိုဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့လာလိမ့်မယ်။ သို့သော်အင်တာနက်သည်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆူညံသံများစွာဖြင့်အလွန်အမင်းပြည့်နှက်နေခြင်းမဖြစ်မှီတွင်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဟာအရင်တုန်းကအတိုင်းမသွားဘူးလို့သင်စိတ်ပျက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသင့်အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီ ယနေ့၊ သင်သည်ပရိသတ်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုဂရုစိုက်လျှင်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရှေ့သို့တွန်းတင်ရန်မဟာဗျူဟာကိုသင်လုံးဝတည်ဆောက်ရမည်
စိတ်ကြိုက်လေ့လာရန် InMoment လေ့လာမှုမှမမျှော်လင့်သောသော့ချက် (၆) ခုတွေ့ရှိရသည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကသုံးစွဲသူများ၏ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ (CX) ကိုအထောက်အပံ့နှင့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၊ စင်စစ်အားဖြင့်စားသုံးသူ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတွေ့အကြုံရှိခြင်းကို ဦး စားပေးရွေးချယ်သည်။ အဆိုပါကွာဟမှုကို InMoment၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်စွမ်းအား၏အမှတ်တံဆိပ်များကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကစားသုံးသူမျှော်လင့်ချက်များနှင့်နားလည်မှုနှင့်မည်သို့တွေ့ဆုံနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလေ့လာမှုအသစ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောနိုင်ငံတိုင်း၌၊
အဘယ်ကြောင့် 2016 မိုဘိုင်းစီးပွားရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်ဆုံးအချက်ဖြစ်လိမ့်မည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 30, 2015 ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 1, 2021 ဂျွန် Koetsier
အန္တာတိကရှိသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မိုဘိုင်းဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နေကြသည်။ ဆီးရီးယားရှိမိဘများသည်နည်းပညာအလွန်အကျွံသုံးခြင်းဖြင့်ကလေးများအတွက်စိုးရိမ်သည် အမေရိကန်ဆာမိုအာကျွန်းရှိကျွန်းသားများသည် 4G နှင့်ဆက်သွယ်သည်၊ ၇၅ ပေါင် ၀ န်းကျင်တင်ဆောင်နေစဉ်တွင်နီပေါနိုင်ငံရှိ sherpas များသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်စကားပြောကြသည်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ? မိုဘိုင်းစီးပွားရေးသည်ကမ္ဘာအနှံ့သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တချိန်လုံးကြားရသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ယခုနှစ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူသန်း ၈၀၀ ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သန်း ၆၀၀ ပို့သည်။ လက်ရှိနှင့်အတူထပ်ပေါင်းထည့်ပါ
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 9, 2014 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 8, 2014 Douglas Karr
လူမှုရေး၊ မိုဘိုင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာများဖြင့်အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုကူညီသည့်အုတ်ခ်ျဖစ်ကုမ္ပဏီမှရှေးရှေးများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကြီးမားသောပြissueနာကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသောဤသတင်းအချက်အလက်များကိုအတူတကွစုစည်းထားကြသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုက၎င်းတို့သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သာလွန်သောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်ဟုထင်ကြသော်လည်းလက်တွေ့တွင်စားသုံးသူများ၏ ၉၂% သည်သဘောမတူခြင်းဖြစ်သည်! Ouch ။ ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့ဖူးပေမယ့်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုကြပြီးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘူး
Monday, June 9, 2014 Sunday, June 8, 2014
Post နှင့် Status Update ပုံစံများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 9, 2014 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2015 Douglas Karr
ငါဒီ infographic ကိုဘယ်လိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ရေးသားချက်များဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုမပြောတတ်ဘူး။ သို့သော်၊ သင့်ဘလော့ဂ်၊ ဗီဒီယိုနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မွမ်းမံခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကမည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးစွာသောရှင်းလင်းချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏လူကြိုက်များသောသတင်းအချက်အလက်များ၏စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည် - ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်နှင့်ဗီဒီယိုတွင်ထပ်ထည့်သည်။ ပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ လူမှုရေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် hashtags များသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းများဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားများကသူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်ရန်သာလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသည်။ ငါ